Analankinina hopitalibe: tovolahy mpivarotra trondro maty an-drano | NewsMada
Analankinina hopitalibe: tovolahy mpivarotra trondro maty an-drano
Natelin’ny rano ilay tovolahy 20 taona, tany Toamasina, rehefa nilomano noho ny hafanana. Nokarohin’ny mpamonjy voina ka hita ihany izy, adiny iray taty aoriana.
Nitrangana loza indray teo amin’ny fitohizan’ny ranomamy amin’ny Lakandranon’i Pangalanina sy ny ranomasina eo amin’ny vavavinany Analankinina Hopitalibe – Toamasina, ny alahady tolakandro teo tokony ho tamin’ny 2 ora sy 30 minitra. Tovolahy maromaro mandeha amin’ny andiany izay samy mpivarotra trondro sy languste, ary efa samy nandray zava-pisotro misy alikaola ka nilaza fa nafana ka hilomano.
Tsy nisy 5 minitra akory ny nirobohan’ity tovolahy ity ny rano, efa nilentika ary tsy hitan’ny namany fa feo tokana toa nikiaka kely fotsiny ny henon’ireo niara-dia taminy. Taorian’izay, niantso ny olona teny an-tanàna ireo namany nilaza fa lasan’ny rano ao amin’ny lakandrano i Doudou ka mbola tsy hita. Tsy niandry ela kosa ireo vondron’ny mpanjono izay eo an-tanàna fa nandray fitaovana ary lasa niaraka nanao fikarohana. Adiny iray taorian’izay, hita faty ilay tovolahy vao 20 taona, mpivarotra hazandrano, ity.
Mila fitandremana ny rano
Fotoana mampiakatra ny rano izao vanim-potoana fahavaratra izao, ary mafana ihany koa. Maro ny olona tratran’ny fakam-panahy ny hilalao rano kanefa mety hampidi-doza raha tsy voafehy. Tranga mateti-piseho izany ka na hatramin’ny tanimbary na lava-biriky ilalaovan’ny sasany rano aza, mety hampidi-doza. Indrindra ho an’ny ankizy, izay mila fanaraha-maso manokana mihitsy.
Ankoatra ny trano mety hirodana, na trano hihotsaka, atahorana ihany koa ny rano sy mila fitandremana. Andanin’izany ny mety hisian’ny rivodoza ankoatra ny oram-pahavaratra.